Wararkii ugu dambeeyay diyaar garowga loogu jira kulanka berri ee codka loogu qaadayo Ra’iisul Wasaaraha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa maalinta berri oo Sabti ah u balansan kulan codka kalsoonida loogu qaadayo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed, iyadoo shirar gaar gaar ah iyo diyaar garow xoog leh uu ka socdo Hotelada iyo xarumaha dowladda oo Xildhibaanada ay leeyihiin.
Kulanka Berri ayaa qorshihiisu yahay marka uu soo gaba gaboobo qeybta hartay ee dooda Xildhibaanada in la guda galo codka loo qaadayo Ra’iisul Wasaaraha oo ah mid gacan taag ah, waxaana shalay ay Xildhibaanada ay soo mareen maalin howl adag ah, markii kulankii Baarlamaanka uu soo gaaray ilaa gelinkii dambe.
Xildhibaanada ka doodayay mooshinka ayaa ahaa kuwo aad u kala aragti duwanaa, waxaana ay isugu jireen kuwo mooshinka difaacayay iyo kuwa ka soo horjeeda oo ku tilmaamay mooshinka mid sharci daro ah oo ka yimid Madaxtooyada.
Maanta oo jimco ah ayaa la filayaa in loo geli doono ololihii ugu dambeeyay ee shirka berri loo balansan yahay, waxaana magaalada ka kala dhici doona shirar iska soo horjeeda oo ah mid dhoolatus siyaasadeed oo labada dhinac ee Baarlamaanka ay ku soo bandhigayaan cududooda.
Xildhibaan Bishaar Ugaas oo taageersan Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay inay maanta ku leeyihiin magaalada Muqdisho dhoolatus siyaasadeed oo ay isugu diyaarinayaan kulanka berri, isagoo rajo ka muujiyay in guusha dhinacooda ay raaci doonto.
“Maanta waxaa yeelaneynaa kulan weyn oo aan ku tabaabusheysaneyno kulanka berri, qorshaheena waa inaan dhoolatus siyaasadeed soo bandhigno, isu imaatinkeena uu noqdo mid aan ku xaqiinineyno in maalinta sabtida ay guusha na raaci doonto oo aan cod ku kala bixi doono, codna aan ku diidno inagoo dareenkeena muujineyna”ayuu yiri Xildhibaan Bishaar Ugaas oo wareysi siiyay BBC-da
Waxaa uu sheegay inay ku kalsoon yihiin codka meesha uu u bato, hadii laga guuleysatana ay taageeri doonaan, isla markaana si dimoqraadiyad ah ay u soo dhoweynayaan wixii ka soo baxa codka Baarlamaanka.
Sidoo kale Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah Xildhibaanada mooshinka ka keenay Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dhinacooda ay rajo aad u sareysa ka qabaan inay codka heli doonaan.
“Anaga waxaa ku kalsoonahay in codka aan heli doono, waxaan u diyaar garoobeynaa sidii sida saxda ah maalinta berri cod lagu kala baxo, waxaana ku qanceynaa go’aanka Baarlamaanka ka soo baxa, kalsooni badan waa qabnaa”ayuu yiri Xildhibaan C/rashiid Xidig.
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya inay socoto xildhibaano la kala jiidanayo, gaar ahaan kuwo loo sameynayo balan qaadyo xilal iyo kuwa kale, iyadoo arrintan ay tahay mid aad looga hadal haayo magaalada Muqdisho oo ah marka xaaladahan oo kale bilowdaan in olole loo galo codka Xildhibaanada.
Shirar gaar gaar ah ayaa tan iyo xalay ka socday Hotelada Muqdisho iyo xafiisyada Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, waxaana loolan adag loogu jiraa kasbashada Xildhibaanada marka ay timaado in maalinta berri cod loo qaado mooshinka kalsooni kala noqoshada Ra’iisul Wasaaraha.
Lama oga halka ay guusha raaci doonto, iyadoo maalinta berri si aad ah dadka u sugayaan halka ay dhinac u dhici doonto, waxaana dib loo xusuusan doonaan bishan oo kale sanadkii hore, xilligaas oo uu Baarlamaanka codka kalsoonida u diiday Ra’iisul Wasaarihii hore Cabdi Faarax Shirdoon, markii ay isku dhaceen isaga iyo Madaxweynaha.
Communique: Nabaddoon Conference